UNWTO dia hifindra any Arabia Saodita amin'ny fihazonana azy: Sekretera jeneraly Zurab Pololikasvili amin'ny olana lehibe?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » UNWTO dia hifindra any Arabia Saodita amin'ny fihazonana azy: Sekretera jeneraly Zurab Pololikasvili amin'ny olana lehibe?
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny minisitry ny fizahantany any Saudi Arabia Ahmed Al Khateeb. no tena mampihetsika sy mikororosy eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany manerantany, raha ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikasvi, dia mety tsy hanana asa atsy ho atsy.
Miato ny hetsika foiben-toeran'ny UNWTO, saingy mbola tsy nifarana ny tantara io.
Ny famindrana ny foiben-toeran'ny UNWTO avy any Espana mankany Saudi Arabia dia nahasarika ny sain'ny praiminisitra Espaniola Pedro Sánchez sy ny sekretera jeneralin'ny ONU Antonio Guterres.
Tizy PM Espaniola dia nanana antso an-tariby niaraka tamin'ny printsy satriana Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud, izay ny hetsika UNWTO no mety ho antony lehibe niantsoana ny ho avin'ny fifandraisana Saodiana-Espaniola.
Mahagaga fa i Antonio Guterres, ny sekretera jeneraly dia niditra an-tsehatra ihany koa. Tsy noraharahaina mihitsy ny fanodikodinan'ny mpifidy an-taonany ny sekretera jeneralin'ny UNWTO, Zurab Pololikasvili, ary mbola tsy raharahaina any New York. Ankehitriny ny SG dia mirotsaka an-tsehatra taorian'ny fanairana nataon'ny governemanta Espaniola.
Ny fidirana an-tsehatra ataon'ny Firenena Mikambana mba hitazomana ny hetsika UNWTO dia nahomby dieny izao.
Saingy izao dia mety manapa-kevitra ny hisintona ny fanohanany ny sekretera jeneraly Pololikashvili i Espana.
Araka ny loharanom-baovao, ny fanodinkodinana ao amin'ny Ny fifidianana janoary ho an'i Zurab Pololikashvili ho sekretera jeneralin'ny UNWTO dia ataon'ny Komity Mpanatanteraka UNWTO. Miaraka amin'ny fanampian'ny Espaniôla ny fanohanan'ny mahery fihetsika ny sekretera jeneraly tsy ara-dalàna dia mety hifarana ihany.
Ny fifidianana indray ho an'ny Zurab dia tsy maintsy hamafisina ao amin'ny General Moroccan Assembly alohan'ny faran'ny taona. Tsy i Espana ihany, fa firenena maro hafa eto amin'izao tontolo izao no afaka ary tokony hanohitra ny fanamafisana an'i Zurab amin'ny fotoam-piasana faharoa, ary hanafoana tanteraka ny fifidianana tamin'ny taona 2018.
eTurboNews rnitatitra ara-potoana fa ny sekretera jeneralin'ny UNWTO dia tsy voafidy ara-dalàna sy ara-dalàna mihitsy tamin'ny fe-potoam-piasana 2018 ankehitriny.
Ny famindrana ny foiben'ny UNWTO ho any Saudi Arabia
Na dia mbola tsy fangatahana ofisialy nataon'ny Saodiana aza io hetsika io, dia tsy natolotra an-taratasy tamin'ny Governemanta Espaniôla izany, na koa tamin'ny UNTWO, i Arabia Saodita dia nandray anjara mavitrika sy niharihary tamin'ny fanatanterahana an'io hetsika io.
Toa i Zurab Pololikashvili no nanome toky ny fanohanany. Nanome toky koa izy fa hanohana an'i Espana. Ireo bitsika navoakan'i Zurab izay naneho ny fanohanany an'i Espana dia voafafa mba hanakorontanana ny fomba fijoroany roa momba io raharaha io.
eTurboNews nanantona minisitra fizahan-tany maro manerantany. Nanaiky izy rehetra fa nifidy ny hifindra any Arabia Saodita ary nankasitraka ny fanampiana nomen'i Saudi Arabia ho an'ny fizahan-tany manerantany.
eTurboNews ny resadresaka mivantana sy ivelan'ny rakipeo niaraka tamin'ny minisitra, fanampiana ary tompon'andraikitra hafa dia nanamafy mazava fa misy fanohanana lehibe amin'izany fifidianana izany.
Nanamafy ihany koa ny haavon'ny firenena mandreraka fahasosorana amin'ny UNWTO ankehitriny.
Noho ny fidiran'ny Firenena Mikambana, ity fampiatoana ny HQ ity dia mety naato nandritra ny fotoana fohy, saingy toa nitohy ny fifampidinihana sy ny fifanakalozan-kevitra manodidina azy.
Azo antenaina ihany fa hitohy ny fitaomana sy ny tanjaka ara-bola ataon'i Saudi Arabia ho an'ny fizahan-tany manerantany. Izao no fotoana ahafahan'ny UNWTO vaovao matanjaka kokoa, fizahan-tany vaovao matanjaka kokoa, ary indostrian'ny fizahantany hivoaka amin'ny krizy ankehitriny.
Miaraka amin'i Arabia Saodita voarohirohy dia nisy fanantenana ho an'ny firenena miankina amin'ny fizahan-tany maro amin'ny fotoana ho avy maizina.
Saudi Arabia dia mety manana fahendrena handaminana ity olana ity ary hiara-hiasa amin'i Espana. Angamba ny firenena roa tonta dia afaka mitana andraikitra lehibe hamerina ny maha-zava-dehibe, ny toerana misy ary ny fitaomana ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany tokony hitarika ity sehatra ity hiala ny areti-mandringana.
María Reyes Maroto Illera dia minisitry ny indostria, varotra ary fizahan-tany Espaniola tao amin'ny governemantan'ny praiminisitra Pedro Sánchez nanomboka ny taona 19.
Ny Minisitra Maroto dia hita fa malemy tao Espana. Ny minisitry ny fizahantany espaniola, Reyes Maroto, niresaka tamin'ny Radio Canal Sur tamin'ny alatsinainy, dia nanoso-kevitra fa ny fipoahan'ny volkano ao La Palma dia mety ho mpizahatany vaovao, manentana ny mpitsidika ho tonga.
Androany dia tonga tany amin'ny ranomasina i Lava avy amin'ny volkano ao La Palma. Ny ahiahin'ireo tompon'andraikitra ankehitriny dia ny rahona misy poizina izay mety hahatratra ny Nosy Canary, noforonin'ny fifandraisana teo anelanelan'ny vato anidina sy ny ranomasina.
Ny fiaraha-miasa mandresy / mandresy miaraka amin'i Arabia Saodita dia azo antoka fa hampiakatra ny biraon'ny minisitry ny fizahantany Espaniôla ankehitriny.
Inona no ilaina raha te hifindra UNWTO?
Vato 106 no nilaina hanekena ny hetsiky ny foibe. Araka ny eTurboNews loharanom-baovao, efa ho 90% amin'ireo vato ireo no efa azo. Nisy fanohanana lehibe avy any Afrika, ny tontolo Arabo, fa koa ny Karaiba, ary na dia ireo firenena eoropeanina aza ..
Fa maninona no Saudi Arabia?
Saudi Arabia ao amin'ny drafitra stratejika 2030 dia manana fizahan-tany amin'ireo laharam-pahamehana telo.
Ny printsin'ny satro-boninahitra Mohamed Bin Salman dia nanolotra ny firenena mandeha manomboka amin'ny fandraisana anjara 1% amin'ny fizahan-tany mankany amin'ny harin-karena faobe hatramin'ny 10% amin'ny drafitra mandritry ny 2030.
Novonoin'ny minisitry ny fizahan-tany Saudi Arabia Ahmed Al Khateeb ny drafitra.
Tamin'ny tapaky ny volana septambra, nikarakara fitsidihana ny foibe UNWTO any Madrid, ny Palacio de Congresos de La Castellana, ny governemanta espaniola.
Nanatrika io fitsidihana io ny jeneraly sketikanina Pololikashvili saingy nandositra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety niaraka tamin'ny minisitra Reyes Maroto sy José Manuel Albares. Tsy nisalasala izy nanatrika ny fampahalalam-baovao na nandà ny tsaho momba ny fanovana ny foibe sy ny fanohanany an'i Riyadh
Tamin'izay no nanapa-kevitra ny governemanta Espaniola handeha mivantana amin'ny ONU.
Volana roa lasa izay, ny UNWTO dia nikarakara forum iray tany amin'ny firenena Afrikanina Tatsimo iray mba hiresahana momba ny fahazoana mamorona marika fizahan-tany iraisana ho an'ireo firenena ireo.
Nisy solontena avy amin'ny firenena afrikanina 47 nanatrika ny fivoriana nandritra ny telo andro. “Tao dia afaka niresaka nitokana tamin'izy rehetra ny sekretera jeneraly, ary tsy nisy vavolombelona avy amin'ny kaontinanta hafa.
Ny vola tian'i Arabia Saodita narotsaka hampiasaina dia mety ho nahomby tamin'ny tetik'asa fizahan-tany sy fizahan-tany any amin'ireo firenena ireo.
Ny fifandraisana teo amin'i Espana sy ny UNWTO dia tsy niavaka fa mendrika mihitsy, hoy ny tatitra tamin'ny fampahalalam-baovao Espaniola. “Nifidy an'i Zurab anefa i Espana hanohitra ny firotsahan-kofidina hafa izay nahitana sekretera lefitra espaniola.”
Ny zava-misy misy ny foiben'ny UNWTO dia tsy mahatonga an'i Espana ho renivohitry ny fizahan-tany manohitra ny mifanohitra amin'izay tian'ny sasany ho hita.
"Tsy dia fantatry ny governemanta Espaniôla fa ny volan'ny birao foibe dia andoavam-bola mandeha ho azy isam-bolana ary tsy misy mahalala momba azy io afa-tsy ilay tompon'andraikitra izay manafatra ny famindrana banky, izay mbola mandeha ho azy." Espaniôla no mandoa ny foiben'ny UNWTO. Izany rehetra izany dia mitentina 2 tapitrisa Euros isan-taona any Espana.
The Fiampangana ny sekretera jeneralin'ny UNWTO mitovy amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Asa (ILO) sy ny Tale Jeneralin'ny Fampandrosoana ny Firenena Mikambana (UNDP): $ 20,000 12 isam-bolana ho an'ny fandoavam-bola 240,000 isam-bolana = $ 40,000. Mahazo XNUMX € isan-taona koa izy ho an'ny trano miampy fiara sy mpamily. Ny sekretera jeneraly dia omen'ny UNWTO fa tsy i Espana.
Ny karamain'ny firenena tsirairay amin'ny maha mpikambana azy ao amin'ny UNWTO dia miankina amin'ny harin-karena faobe, ny isam-batan'olona ary ny fomba fahitan'ny mpizahatany izay ampihariny. Io vola io dia tsy afaka mihoatra ny 5% amin'ny tetibolan'ny fikambanana.
Ireo firenena izay mandoa be indrindra dia i Frantsa, Sina, Japon, Alemana ary Espana, izay 357,000 euro isan-taona no mandray anjara. Ireo mandoa kely indrindra dia i Seychelles sy Samoa, miaraka amin'ny sarany 16,700 XNUMX euro isan-taona.
UNWTO tsy mitondra lanja firy amin'ny indostrian'ny fizahantany sy ny toerana itodiana. Mifantoka tsara, tsy misy teti-bola -12 tapitrisa dolara isan-taona, izay 60% no mankany amin'ny karama-, miaraka amin'ireo tompon'andraikitra notendren'ny fireneny. Ny kolikoly anatiny sy ny fikatsoana ary ny fomba fanao taloha dia efa olana hatrizay.
UNWTO dia manana ankehitriny Mpikambana 159. Ny Firenena Mikambana dia manana mpikambana ao amin'ny firenena 193.
Nandao ny UNWTO i Etazonia tamin'ny 1995, Belzika tamin'ny 1997, ny Fanjakana Mitambatra tamin'ny 2009, Kanada tamin'ny 2012, ary Aostralia tamin'ny 2014.
Ary koa, tsy misy i Irlanda, Sipra, Nouvelle Zélande, Luxembourg, ary ireo firenena avaratra rehetra: Islandy, Norvezy, Suède, Failandy, ary Danemarka, miampy firenena roa any Baltika, Estonia sy Litoania dia manao UNWTO ho fikambanana malemy.
Mazava fa tari-dalana vaovao iray ho an'ny UNWTO no ilaina mba hivelomana amin'ny maso ivoho mikambana miaraka amin'ny Firenena Mikambana.
Hatreto aloha dia mbola mamaly i Saudi Arabia UNWTO ary ny fizahantany manerantany dia tsy misy firenena hafa manerantany. Hisy dingana manaraka, azo antoka izany.